Times City Jewellery Mall တွင် Test Drive Event ပြုလုပ်ကျင်းပမယ့် Ford Myanmar - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > News > Local Updates > Times City Jewellery Mall တွင် Test Drive Event ပြုလုပ်ကျင်းပမယ့် Ford Myanmar
Times City Jewellery Mall တွင် Test Drive Event ပြုလုပ်ကျင်းပမယ့် Ford Myanmar
Times City Jewellery Mall တွင်ပြုလုပ်ကျင်းပမယ့် Ford Myanmar Test Drive Event စတင်ဖို့ အချိန်နီးကပ်လာပါပြီ။
Ford Myanmar Test Drive Event မှာဆိုရင်တော့ Ford Ranger Wildtrak နဲ့ Territory Titanium+ တို့ကိုလည်း ခင်းကျင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပြီး
Everest Trend 2.2
Everest Titanium 3.2
Territory Titanium+ ကားများကို စိတ်တိုင်းကျ Test Dirve မောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Test Drive Event မှာFord ကားသစ်များကိုရရှိနိုင်မယ့် Model ပေါ်မူတည်ပြီး Fixed Exchange Rate ၁ဒေါ်လာကို ၁,၇၈၅ ကျပ်နှုန်းထားဖြင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး USD 500 Cash Back ကိုလည်းပြန်လည်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါအခွင့်အရေးတွေကိုတော့ Test Drive Event ကာလဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ရက်နေ့အထိပဲရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အရစ်ကျဝယ်ယူလိုတဲ့ Customer တွေအတွက်လည်း AYA Bank နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် မကြာမီ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတ Test Drive Event မှာဆုံကြမယ်နော်။
အမှတ်(145)၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီး, ပါဆတ်ရပ်ကွက်, တာချီလိတ်မြို့, ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း။
Ph. 09 426 668 787, 09 428 664 889
အမှတ်(2/47), ချင်းတွင်းလမ်း, ဘုရားဖြူ နယ်မြေ (၅), တောင်ကြီးမြို့၊ရှမ်း(တောင်)။
Ph. 09 446 444 467
Ph. 09 404 463 335
Ford Nay Pyi Taw
Nobel kingdom Co., Ltd
အမှတ် (၁၀၁၈), ရာဇဌာနီလမ်း, အောင်သာယာရပ်ကွက်, ပုဗ္ပသီရီမြို့နယ်, နေပြည်တော်။
Ph. 09 965 000 701
Andaman AL Co., Ltd, PEARLHARBOR
အမှတ် (၁၅),ကမ်းနားလမ်း, ထားဝယ်စုရပ်, မြိတ်မြို့။
Ph. 09 454 187 795, 09 785 640 245
အမှတ် (ဇ/ ၁၅-၁၆) ၊ သိန္နီလမ်း ၊ နယ်မြေ (၁၅) ၊ လားရှိုး မြို့ ။
Ph. 09 400 778 888, 09 400 567 866
Ford Pyin Oo Lwin
အမှတ် (၁၅၂) ၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၄) ၊ ပြင်ဦးလွင် မြို့။
Ph. 092044 777, 0852023 239, 09 782 044 777
Showroom Hotline (YGN) – 09 420 778 210,
09 771 509 086
Showroom Hotline (MDY) – 09 797 291 830, 09 967 235 166
Service Hotline (YGN) – 09 965 901 674
Part Hotline (YGN) – 09 798 333 283
PREVIOUS 13 Dec 2021
1.5 L Turbo Engine ဖြင့်ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် 2022 Ford Equator Sport
NEXT 16 Dec 2021
Australia ဈေးကွက်အတွက် ပထမဆုံး 8 – Seat EV ဖြစ်မည့် 2022 Mercedes – Benz EQV နှင့်eVito